पिसाब रोक्ने बानीले तपाई रोग निम्ताउँदै त हुनुहुन्न ? - हेल्थ आवाज
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ पिसाब रोक्ने बानीले तपाई रोग निम्ताउँदै त हुनुहुन्न ?
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७७ असार २८ गते, २०:५५ मा प्रकाशित
के तपाईको पिसाब रोक्ने बानी छ? अन्य कामलाई महत्व दिने बाहानामा आफ्नै शरीरको नियमिततालाई बिगार्दै त हुनुहुन्न ? यदि तपाईमा पिसाब रोक्ने बानी छ भने तपाई यी समस्याहरुको शिकार हुने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
व्यक्तिको ब्ल्याडर(पिसाब थैली) नियमित खाली राख्नुपर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिलाई पिसाब लाग्ने भएता पनि कम्तिमा प्रत्येक ३ घण्टामा एक पटक पिसाब लाग्ने अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ । व्यक्तिको उमेर अनुसार पनि कति समयमा पिसाब लाग्ने र नलाग्ने हुन्छ । उमेरको हिसाबमा व्यक्तिलाई पिसाब लाग्ने सामान्य अवस्था यस्तो छ ।
उमेर औसत ब्ल्याडरको साइज ब्ल्याडर भरिने समय
शिशु (० देखि १२ महिना) १ देखि २ औसत १ घण्टा
बालक (१ देखि ३ वर्ष) ३ देखि ५ औसत २ घण्टा
बच्चा (४ देखि १२ वर्ष) ७ देखि १४ औसत २ देखि ४ घण्टा
युवा १६ देखि २४ औस ८ देखि ९ घण्टा(प्रत्येक घण्टा २ औसत)
१ औसत =२८ ग्राम ।
ब्ल्याडर(पिसाबथैली)को सिधा सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले पनि यदि तपाईको ब्लयाडर(मुत्राशय)रिसेप्टर्स भरिएको छ भने तपाईको मस्तिष्कले तपाईलाई जानकारी दिन्छ र पिसाब लागेको थाहा पाउनु हुनेछ । तर कतिपय अवस्था तथा परिस्थितिका कारण व्यक्तिहरु पिसाब लाग्दा लाग्दै पनि बेवास्ता गरेर पिसाब रोकेर बस्छन् । यसले उनीहरुमा कालान्तारमा गएर नकरात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, पनि पिसाब रोक्नु व्यक्तिको स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक मानिन्छ ।
पिसाब रोक्नाले स्वास्थ्यमा कस्तो असर देखा पर्दछ?
१. यदि तपाईले आफ्नो पिसाबथैली पटक पटक खाली राख्नु भएन भने र यो क्रम निरन्तर २ दिन चलेमा यसबाट तपाईमा पिसाबनली संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।
२. पिसाब रोकेको खण्डमा यसले पिसाबथैलीमा एट्रोफिको शुरु हुन्छ । र, यसलगत्तै तपाईमा असंयमित हुने बानीको विकास समेत हुन पुग्छ ।
कस्तो अवस्थामा चिकित्सकसंग परामर्श लिने?
१. पिसाब फेर्न गाहृो हुने, पोल्ने, नलाग्ने, लागेजस्तो भएपनि पिसाब नआउने समस्याका कारण पिसाब रोक्ने बाहेकका अन्य थुप्रै कारणहरु पनि रहेका छन् । तसर्थ, यदि तपाईलाई पिसाब सम्बन्धि समस्या छ भने तपाईले अनिवार्य रुपमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्दछ ।
२. पिसाब राम्ररी नहुने वा यससम्बन्धि कुनै पनि समस्या भएको कम्तिमा पनि ३६ देखि ४८ घण्टाभित्र हामीले सम्बन्धित चिकित्सकसँग परीक्षण गराई हाल्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा यसले झन् भयावह स्थितिको सिर्जना गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
क्याटेगोरी : अन्य, यौन स्वास्थ्य, सर्ने/नसर्ने रोग